Homeरोचक / विचित्रकण्डमका १० कमाल: लाज नमानिकन हेर्नुहोस कति कामलाग्दो रहेछ !
November 6, 2018 Spnews रोचक / विचित्र Comments Off on कण्डमका १० कमाल: लाज नमानिकन हेर्नुहोस कति कामलाग्दो रहेछ !
सरकारले निःशुल्क रुपमा वितरण गरेको कण्डम अचानक त्यहाँ निकै लोकप्रिय भएछ ।
यसको कारण खोज्दै जाँदा डाक्टरहरुले के पाएछन् भने कण्डम त्यहाँ साडीलाई चिल्लो बनाउन प्रयोग गरिदो रहेछ । बताइएअनुसार एउटा बनारसी सारी बनाउन १४ वटा कण्डमको प्रयोग हुन्छ ।
अमेरिकी सेनाले पनि कण्डम प्रयोग गर्छन्, तर, सेक्सका क्रममा होइन । उनीहरुले बगेको रगत रोक्न, पानी बोक्न, सर्जिकल ग्लोभ्सको रुपमा र बन्दुकमा बालुवालगायतका फोहोर पस्न नदिन कण्डम प्रयोग गर्छन् । – एजेन्सि
आज तिहारको तेस्रो दिन, धनकी देवी लक्ष्मी माताको पूजा आरधाना गरि मनाईँदै